E kwuwaala Mkpa Ọ dị Inye Ndị Okenye Ọgwụgwọ n'Efu
A dụọla ma kpọkuo gọọmenti n'ogo dị iche iche ka ha guzobe amụma inye ọgwụgwọ n'efu nyegara ndị okenye katarala ahụ n'ala anyị. Otu nwa amadi selitere isi n'ogoogo mmụta, bụ ọkammụta Nnamdị Obiekezie kpọrọ oku a n'Ọka bụ isi obodo steeti Anambra n'otu ọgbakọ a chịkọbara, nke isiokwu ya bụ "Ọnọdụ Ndị Okenye n'Ala Naịjiria" Ọkammụta Obiekezie,
Ndị hụrụ mgbe o mere gwara ndị nta akụkọ n’otu nwoke onye agha iyi egwu jiri ụgbọ ala ya mere mgbọ. Ọ na-anya aghara aghara n’okporo ụzọ, n’etiti obodo, n’ehihe ọcha.
Oriakụ Obianọ Enyela Ụmụ Akwụkwọ COOU Ruru Narị Anọ Nkwado
Ụmụ akwụkwọ Mahadum Chukwuemeka Ọdụmegwu Ojukwu ruru narị anọ n'ọnụ ọgụgụ enwetala ọtụtụ nkwado site n'aka nwunye gọvanọ steeti Anambra bụ oriakụ Ebelechukwu Obianọ. Ụmụ akwụkwọ a, bụ ndị sitere na ngalaba ọmụmụ ihe dị iche iche nke ụlọ akwụkwọ ahụ natara nkwalite a oge ya bụ agụ nwaanyị gara leta ndị ụlọ akwụkwọ ahụ, alaka ya nke dị n'Ịgbarịam.